Hindiya: Ardayda 60 waxay raaceen barnaamijka hal abuurka ee Raiisel Wasaaraha “Dhruv” ee Isro HQ | Wararka Hindiya - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Ardayda 60 waxay raaceen barnaamijka hal abuurka ee Raiisel Wasaaraha “Dhruv” ee Isro HQ | Wararka Hindiya
Lixdan arday oo laga soo xulay maadooyinka sayniska, xisaabta iyo farshaxanka jilista ayaa ka qaybqaadan doona barnaamij maalmo 14 ah oo ka bilaaban doona xarunta Ururka Cilmi-baarista Indhaha ee Indiya (Isro) ee Bengaluru Khamiista waxayna ku dhamaan doontaa IIT-Delhi 23 Oktoobar Waxaa xushay ardayda inay la taliyaan khubaro hoos timaada barnaamijka tababarka cusub ee Raiisel Wasaaraha - "Dhruv". Moodhida mashruuca Dhruv, ISRO waxay kaloo dhiseysaa xarumo lagu baaro tikniyoolajiyada teknolojiyada iyo xarumo cilmi baaris oo lagu sameeyo daafaha dalka si ay u adkeystaan ​​fursadaha carruurta iyo dhalinyarada ee sayniska hawada.
Bilowga furitaanka, ayuu Wasiirka Midowga Shaqaalaha ee Horumarinta Kheyraadka Aadanaha Ramesh Pokhriyal uu sheegay in ay ahayd qorshe lagu tababarayo hogaamiyaasha mustaqbalka ee India si ay u rumeeyaan himilada. Badbaadinta 5 000 bilyan iyo bixinta xalka isbedelka cimilada. "Iyada oo loo marayo hannaan adag oo xulasho ah, ayay dawladdu waxay u aqoonsatay ardayda 60 karti u leh xirfadaha iyo cilmiga sayniska ee Barnaamijka Barnaamijka Hal-abuurnimada ee Raiisel Wasaaraha - Dhruv. Ardayda, oo loogu yeeri doono Dhruv tara, ayaa la kulmi doona oo fursad u heli doona inay ka wada hadlaan arrimaha ugu waaweyn ee haysta bulshada caalamka, "ayuu yidhi Pokhriyal.
“Ardaydani waxay ka fikiri doonaan caqabadaha sida diirimaadka adduunka, isbedelka cimilada, barafka dhalaalaya, ilaalinta biyaha iyo arrimaha beeraha. Tani waxay ku kicineysaa Hindiya inay noqoto bilyano ah 5 000 billion dollars, ”ayuu raaciyay wasiirka.
Qaabka "Dhruv", Isro wuxuu sidoo kale ku hawlan yahay samaynta xarumaha abuurka iyo xarumaha cilmi baarista ee loo qoondeeyay tikniyoolajiyadda hawada. Hay'ada hawada, oo kaashaneysa dowladda Tripura, waxay horeyba xarun ka sameysan ku leedahay Agartala. Xarumo kale ayaa wali laga dhisayaa Jalandhar, Bhubaneswar, Nagpur, Indore iyo Tiruchirapalli.
Isaga oo ka hadlaya xarumaha soo-saarista, Madaxweynaha Isro K Sivan wuxuu u sheegay TOI: “Xarumahan waxay horumarin doonaan bilaabayaal waxayna dhiiri-gelin doonaan hal-abuurka iyo baarista tikniyoolajiyadda hawada. Xarumahu waxay ka caawin doonaan shirkadaha bilowga ah inay horumariyaan tabaha noocyada nidaamka meelaynta iyagoo lala kaashanayo qaybta. Isro wuxuu qiimeyn doonaa noocyadan qaabab wuxuuna ku iibsan doonaa si waafaqsan qiimahooda. "
Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan dhisno xarumo cilmi baaris oo kuyaala Guwahati, Jaipur, Varanasi, Kurukshetra, Patna iyo Kanyakumari. Xarumuhu waxay diirada saari doonaan cilmi baarista waxayna siin doonaan meel loogu talo galay dhalinyarada da'da yar ee wadanka ku nool si ay ula yimaadaan fikrado aad u wanaagsan isla markaana ay ku baari doonaan fikradahan kobcinta teknoolojiyadda hawada, ”ayuu raaciyay Sivan.
Madaxweynaha Isro, Raiisul Wasaaraha K Vijayraghavan madaxa lataliyaha xagga sayniska, iyo cirka ugu horeeya ee Hindiya, Taliyaha Wing Rakesh Sharma (howlgab ah) ayaa ka qeybgali doona hindisaha Dhruv Khamiista.
Caafimaadka: Ecobank waxay kordhisaa wacyiga ku saabsan kansarka